Isihlangu esilahlwa ngothuli ...
Izingubo zokuhlukanisa ezilahlwayo
I-KN95 Mask (Akuyona eyokwelapha)
Isigaxa sothuli esiphrintiwe
Okubalulekile: i-polypropylene, indwangu engalukiwe Impilo yeshelfu: iminyaka emi-2 ukusebenza komkhiqizo: ukusetshenziswa kokuvikela ezikhungweni zezokwelapha Umbala: okuluhlaza okwesibhakabhaka, okumhlophe Ukwethulwa koMkhiqizo Kwenziwe nge-polypropylene engahambisani nesikhumba enobungane, ehlolwe ngezinto eziyingozi. Yenziwe nge-latex iraba yamahhala enokuklanywa kokuhlanganiswa okuphezulu. Zonke izinto ezisetshenziswayo ziyahlolwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi imithetho esezingeni eliphakeme kakhulu neyokusebenza iphakeme kunezidingo zokulawula. Lezi zinyathelo zivimbela ukusabela okwehlukile kokungezwani komzimba ...
Ikhava yesicathulo esilahlwa ngothuli
Okubalulekile: Indwangu engalukiwe Usayizi: 15x40cm (enziwa ngezifiso) Inqubo: ukuthunga noma inqubo yokufaka uphawu lokushisa kokushisa ihhotela, njll Umbala: Isitoreji Esiluhlaza okwesibhakabhaka: ukukhanya okomile, ukukhanya okuvaliwe nokugcina ubufakazi bokushisa Ukwethulwa komkhiqizo Kwenziwe nge-polypropylene engahambisani nesikhumba enobungane, ehlolwe ngezinto eziyingozi. Yenziwe la ...
izingubo ezilahlwayo ezilahlwayo, ezingavundile
Imodeli: ucezu olulodwa olungenayo ikhava yesicathulo Imininingwane: s, m, l, XL, XXL, XXXL Sebenzisa into: Isetshenziswa ngabasebenzi bezokwelapha ezikhungweni zezokwelapha ukuvimbela ukudluliselwa kwegciwane kusuka ezigulini kuya kubasebenzi bezokwelapha ngomoya noma ketshezi. Ukusebenza komkhiqizo nokwakheka kwesakhiwo: Lo mkhiqizo ubunjwe ngaphezulu nge-hood top, ibhulukwe, umugqa wenjoloba kanye nelogo yangemuva yekhola. It is ikakhulukazi ezenziwe high-ukuminyana polyethylene fibre Indwangu, okuyinto eyenziwe Hooded eyodwa-ucezu isakhiwo futhi uphawu yenjoloba ...
Izingubo zokuhlinza ezingezona ezilahlwayo
Okusetshenziswayo: Ukucaciswa kwendwangu engalukiwe: Isitayela se-30g-65g: imikhono emifushane namabhulukwe Inqubo: ukuthunga noma inqubo yokufaka uphawu lokushisa kwe-Heat Shelf: iminyaka emibili ukusebenza komkhiqizo: ukusetshenziswa kokuvikela ezikhungweni zezokwelapha Ububanzi besicelo: isibhedlela, ubuhle, ukuvimbela ubhubhane, ukuhlolwa kwekhwalithi , imboni yamakhemikhali, njll Umbala: okuluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, omhlophe, njll Isitoreji: ukoma, ukukhanya okuvaliwe nokugcina ukufakazela ubufakazi bokushisa Ukwethulwa komkhiqizo Kwenziwe ngesikhumba se-polypropylene engahambisani nesikhumba, esihlolwe ...
Okubalulekile: Indwangu engalukiwe Ukucaciswa: Isitayela se-30g-65g: Inqubo yekhava eguqukayo: Inqubo yokuthunga noma ye-ultrasonic yokufaka uphawu lokushisa imboni, njll Umbala: okuluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, omhlophe, njll Isitoreji: ukoma, ukukhanya okuvaliwe nokugcina ubufakazi bokushisa ukufakwa komkhiqizo Kwenziwe ngesikhumba se-polypropylene engalukanga enobungani, esivivinyelwe i-subs eyingozi ...
Incazelo: 15.5 * 10.5cm Izinga lokuphatha: GB 2626-2006 Ukuhlolwa: Ukuhlolwa okuqeqeshiwe: Ukusebenza koMkhiqizo Ofanelekayo: PFE ≥ 95%, kufinyelela ezingeni le-kn95. Ukusebenza komkhiqizo: PFE≥95%, ifinyelela ezingeni le-KN95. Izinto zokusetshenziswa: Indwangu engavukiwe engu-54%, indwangu encibilikayo engu-24.5%, ukotini womoya oshisayo u-21.5% Impahla Engavuthiwe: 54% yendwangu ephothiwe engu-24.5% incibilikile ishayiswe ngo-21.5% ukotini womoya. Ukusebenza: iminyaka emibili Ukusebenza komkhiqizo: Lo mkhiqizo wenziwe ngendwangu ye-PP engeyona ephothiwe, indwangu encibilikisiwe, isiqeshana sekhala, ibhande lokulenga nokunye. Thro ...
Okusetshenzisiwe: Ukusebenza komkhiqizo okotini okungu-100%: Okomamaski wobuso bendwangu yabantu abadala abangosayizi abangagciniwe Ukucaciswa: 5 3/4, L x 3 1/8 ″ H. Imininingwane engezelelweyo: Imichilo eguquguqukayo, enwebeka ngaphezulu kwendlebe Yakhelwe ngezincomo ze-CDC kumamaski angewona ezokwelapha. Imibala etholakalayo: Ukusebenza koMkhiqizo okwenziwa ngezifiso: Okuphinda kusetshenziswe, ukusetshenziswa komuntu siqu, ibanga okungelona elezokwelapha, izindwangu zobuso bendwangu. Inikelwe ngemibala ekhangayo, lezi zimaski zobuso zikakotini ezingasetshenziswa kabusha ezokusetshenziswa okungezona ezokwelapha. Sebenzisa i-th ...
Usayizi womkhiqizo: Ukuhlolwa okungu-17.5cm x 9.5cm: Ukusebenza komkhiqizo ofanelekile: I-BFE≥95% Okusetshenzisiwe: Izendlalelo zangaphakathi nezangaphandle ziyindwangu Engavukiwe, kanti ungqimba oluphakathi luyinto ephothiwe enganyibilikiwe. Kuhambisana ne-EN14683 ejwayelekile (iTyple 1) ne-FDA Validity: Isicelo seminyaka emi-2: Isifihla-buso senzelwe ukuba siseduze nebhuloho lekhala futhi simboze isilevu ukuze kuthuthukiswe ukuvikeleka. Isifihla-buso esakhiwe ngezingqimba ezincanyana ezi-3 zomucu ezivumela ukuphefumula okujwayelekile. Imaski yokuhlinza yenzelwe ukusiza ukuvimba ukwehla kwezinhlayiyana ezinkulu ...
Isudi yokusebenza ye-SMS / isudi yokuzihlukanisa
Indwangu yokugqoka elahlwayo elahlwayo yenziwa ngendwangu ekhanyayo nenethezekile ye-SMS engeyona eyelukiweyo. Indaba inezici zamandla aphakeme, ukusebenza okuhle kokuhlunga, akukho okunamathiselwe, ukuvunyelwa komoya okungaqondakali kanye nokuqina kokulwa. Ngesikhathi sokuhlinzwa, ingavimba ngempumelelo ukuhlasela kwegazi, igciwane kanye namagciwane.
Ikhava Yesicathulo SeSolation Solation
Ingcindezi yensimbi yokuvikela unyawo, esetshenziselwa ukuvikela, efanelekile ezikhumulweni zezindiza, eziteshini zezitimela, eziteshini zezitimela ezinejubane elikhulu, iziteshi ezingaphansi komhlaba, imitholampilo, amafektri, njll.
Ikhava yesicathulo sokuzihlukanisa
Ikhava yezicathulo zokuzivikela ezihlukanisayo, esetshenziselwa ukuvikela, efanelekile ezikhumulweni zezindiza, eziteshini zezitimela, eziteshini zezitimela ezinejubane elikhulu, iziteshi ezingaphansi komhlaba, imitholampilo, amafektri, njll.